Göteborg oo ka cabatay isdhexgalka Soomaalida | Somaliska
Mid ka mid ah dukumintiyada sirta ah ee uu fashilay bogga Wikileaks ayay maamulka magaalada Göteborg cabasho ku aadan fashilka ay ku fashilmeen in ay Soomaalidu dhexgalaan bulshada Sweden ugu cawdeen safiirka maraykanka u fadhiya Sweden 2008dii. Xoghayihii hore ee maamulka magaalada Göteborg Bill Werngren ayaa qoraalo uu u diray safaarada maraykanka uu ku sheegay in xaalada Soomaalida Sweden ay tahay mid go'doon ah. Qoraalada uu u diray Safaarada ayaa waxaa ka mid ahaa mowduucyo uu qoray wargeyska Göteborgs-Posten oo ay soomaalidu ka carootay. Safaarada maraykanka ayaa intaas ka dib qoraal u dirtay maamulka maraykanka ee Washington oo ku aadan xaalada Muslimiinta iyo Soomaalida Sweden ayagoo qoray. "Maamulka jaaliyadaha Muslimiinta waxay soo bandhigeen cunsuriyada ka haysata dadka Muslimiinta ah in ay shaqo helaan, halka maamulka magaalada Göteborg ay soo bandhigeen fashilka ku yimid 30 sano oo isku day isdhex gal ah" Habada arintaan ayaa jaab leh waayo Sweden oo wadan madax banaan ah waa maxay sababta ay maamulada magaalooyinkooda sida Göteborg ay xiriiro ku saabsan fashilkooda ula sameynayaan safaarada maraykanka.
Mid ka mid ah dukumintiyada sirta ah ee uu fashilay bogga Wikileaks ayay maamulka magaalada Göteborg cabasho ku aadan fashilka ay ku fashilmeen in ay Soomaalidu dhexgalaan bulshada Sweden ugu cawdeen safiirka maraykanka u fadhiya Sweden 2008dii.
Xoghayihii hore ee maamulka magaalada Göteborg Bill Werngren ayaa qoraalo uu u diray safaarada maraykanka uu ku sheegay in xaalada Soomaalida Sweden ay tahay mid go’doon ah. Qoraalada uu u diray Safaarada ayaa waxaa ka mid ahaa mowduucyo uu qoray wargeyska Göteborgs-Posten oo ay soomaalidu ka carootay.
Safaarada maraykanka ayaa intaas ka dib qoraal u dirtay maamulka maraykanka ee Washington oo ku aadan xaalada Muslimiinta iyo Soomaalida Sweden ayagoo qoray.
“Maamulka jaaliyadaha Muslimiinta waxay soo bandhigeen cunsuriyada ka haysata dadka Muslimiinta ah in ay shaqo helaan, halka maamulka magaalada Göteborg ay soo bandhigeen fashilka ku yimid 30 sano oo isku day isdhex gal ah”
Habada arintaan ayaa jaab leh waayo Sweden oo wadan madax banaan ah waa maxay sababta ay maamulada magaalooyinkooda sida Göteborg ay xiriiro ku saabsan fashilkooda ula sameynayaan safaarada maraykanka.